Daandiin Irreecha Malkaa Sabbataa Eebbifame – Fana Broadcasting Corporate
Daandiin Irreecha Malkaa Sabbataa Eebbifame
Finfinnee, Fulbaana 29, 2012 (FBC) – Kabaja ayyaana Irreecha Malkaa Sabbataa sababeeffachuun Bulchiinsi Magaalaa Sabbataa Daandii kobilstoonii iddoo irreechaa geessu qarshii miiliyoona 7. 5 hojjechiisee guyyaa har’aa eebbisisera.
Bulchiinsi Magaalaa Sabbataa aadaa fi duudhaa ummata oromoo guddisuuf xiyyeeffannoo itti kennuudhaan hojjechaa jira.
Kantiibaan Bulchiinsa Magaalaa Sabbataa obbo Biraanuu Baqqalaan, Daandiin Irreecha Malkaa Sabbataa akkaataa kanaan hojjetamuun isaa xiyyeeffannoo Magaalii keenyaa aadaa fi duudhaan oromoo kanaan dura Magaalaa keenyaa irraa fooliin Oromummaa keessaa badaa turee akka deebiyee urga’uuf ga’ee olaanaa waan qabuuf proojeektoota siidaa gadaa Faajjii fi daandii Irreechaa kun ibsituudha jedhani.
Dabalatanis projektiwwaan akka Magaalaa keenyaatti jalqabaman itti fufsisnee xumuruudhaaf xiyyeeffannoo guddaa itti kennudhaan rakkoo isaanii adda baasuun bara kana keessa Ijaarsa isaanii xumura jedhanii jiru.
Gama biraatiin Daandiin Irreechaa Malkaa Sabbataa qulqulliina isaa eeggatee waan hojjatameef iddoon Irreecha kun immoo Uumata keenyaaf iddoo olaanaa waan qabuuf ummannii oromoo hundi uffata aadaatin faayamee argamuudhaan irreecha irreeffachu qaba jedhaniiru.
Iddoon Irreechaa kun eenyummaa fi mallattoo aadaa fi duudhaa Oromoo waan ibsuuf kununfachuun dhalootaa boruuf akka darbu qabu ergaa dabarsanii jiru.
Daandii Irreecha malkaa Sabbataa iddoo seenaa qabeessaa fi mallattoon Oromummaan itti calaqisuudha.
Baga jala bultii Ayyaana Irreechaa Malkaa Sabbataattin isin gahe.
Hojii Gaggeessaa Bulchiinsa Magaalaa Sabbataa obbo Dhibbara Fufaa Projektii kana adda kan isa taasisuu projeektii koobilii ta’uu isaa qofa osoo hin ta’iin projektii seena qabeessa iddo aadaa fi duudhaan oromoo itti calaqqisuu iddoo Malkaa irreecha irreeffatamu geessu ta’uu isaati jedhaniiru.
Ayyaanni kun gaafa onkolooleessa 2,2012 waan kabajamuuf uummanni Magaalaa keenyaa fi uummanni oromoo hundi irratti argamuudhaan akka Irreecha irreeffattan ergaa dabarsanii kan jiran ta’uu ragaan Waajjira Kominikeeshinii magaalaa Sabbataa irraa arganne ni hubachiisa.